Waa maxay Sumadeyn (Branding) ? – Brandkii
Waxaa jira jahwareer badan oo ka tagan kalmada sumadeyn (Branding), siyaabo badana waa loo cadeyay, hadaba wakhtiyadii hore ayaa waxa lagu qeexi jiray in ay tahey magac, hal ku dhig, calaamad ama nashqadeyn, ama isku darka qaybahan oo dhan kuwaas oo matalla adeeg ama allaab ay shirkadi leedahey. Sumadeyn (Branding) waa waxa ka duwa shirkad tartamayaasheda, wakhtigan casrigeen joognana waxay noqotey arin aad muhiim ah marka la jooga aduunka suuqgeynta.
Waa fikirka kusoo dhacaya macaamiishada marka ay maqlaan magaca shirkadada, waa beegsashada iyo dhexgalka dhaqanka ama fikirka macmiika, waxaanu odhan karnaa wa sawirka maskaxda qofka ku sawiran oo uu arko marka uu xasuusto shirkadada.
Muxuu qabtaa sumad (brand)?
Sumadu (Brand) maahan oo kaliya inaad hesho suuqad beegsaneysid sido kalee waxa uu macmiilka siinayaa khibrad iyo aqoon dheerada inuu u lahaado shirkadada.
Waxaa lagu garta in sumadaadu guuleysatey.
Waxa si cad u gudba fariinta ganacsigaga
Waxaa kor u kaca sumcada ganacsigaaga
Waxaa bata fahanka iyo aqoonta ay macaamiishu ka heystan adeegaga ama allaabtada
Dadka aya ku dhiirada iney iibsadan adeegaga ama allaabtada
Waxa abuurma kalsooni
Hadaba maxaad u baahantahey si aad u sumadeyso (branding) shirkadada?
Raadi magac ku haboon shirkadada, waa muhiim inaad ogaatid sabobta aad ku keentay magaca iyo ujeedada ka danbeesa.
Sameeso logo iyo kalar ku gaar ah, waa iney meel walba ka muuqan karta loga dadu sido kale ay wadataa calaamado matalaya ganacsigaaga.
Diyaari fariinta uu gudbinayo sumadaadu, fariintani wa mida aad rabto inaad kula xidhiidho macaamiishada iyo hadalada aad rabto inaad u isticmaasho xayaysiinta shirkadada.
ka muuji sumadaada qayb walba oo ka mid ah shirkada sida, dharka ay xidhanayaan shaqaalahagu, boodhadhka iyo dhamaan agabka xayaysiinta aad u isticmaasho oo dhan.
Sameeso halku dhig la xasuusan karo fahan badana siin kara qofka
Waa inaad ka duwanaata nashqaad haan, kalar haan iyo waliba fikir haan dhamaan dadka kula tartamaya ee yaguna haysta ganacsi noocagan oo kale ah.
Shirkad bilaa looga ahi waa qof bilaa waji ah
Xoogta kooban hadii aad wax ka fahantey ama aad wax ku dar is leedahey fadlan hoos nagula wadaaga. Sido kale la wadaag asxaabtada.
4 ta shirkadood ee ugu wanaagsan iibinta Host yada.